Otú nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Nexus 5
> Resource> Nyefee> Nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Nexus 5 Mfe
The Google Nexus 5, mere maka ihe, bụ ndị dị otú ahụ a pụtara Android ekwentị, ọ bụghị ya? Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụrụ nye Nexus 5, i nwere ike ghaghị wupu ịgwa enyi gị banyere ya. N'ụzọ dị mwute, ị na-enweta kọntaktị ngwa gị Nexus 5 naanị na-ahụ na niile kọntaktị ka bụ na gị ochie Nokia ekwentị, dị ka Nokia 5800. ka njọ, ebe ọ bụ na ndị a na kọntaktị nwere ihe karịrị a SIM kaadị nwere ike ijide, ị na-azọpụta ha na ekwentị . Nke ahụ bụ ikwu, ị nwere ike abụghị nanị wepụ SIM kaadị na fanye ya na ọhụrụ gị Nexus 5.
Otú nyefee kọntaktị site Nokia ka Nexus 5
Kpebie pịnyere na kọntaktị na nọmba ekwentị otu otu? Kwụsị na. Ọ dị oke na-ewe oge. Mgbe ahụ, olee otú i mezuo nke a? Ekele, Wondershare ka a tọhapụrụ a pụrụ ịtụkwasị obi omume - na Wondershare MobileTrans. Ọ bụ a smart na otu-click ekwentị transfer omume, nke na-ahapụ gị detuo kọntaktị site Nokia ka Nexus 5 na 1 Pịa. The zuru ezu Ama, dị ka ụlọ ọrụ aha, adreesị ozi-e na adreesị ụlọ, a ga-depụtaghachiri na-azọpụta na gị Nexus 5 nakwa dị ka nọmba ekwentị.
Download usoro na Windows PC na-enye ya a ogbugba.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ekwentị transfer omume na a Windows PC
Ka malitere, wụnye na-agba ọsọ ekwentị transfer omume - na Wondershare MobileTrans na Windows PC. Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi ya mfe na onye ọrụ-enyi na enyi bụ isi window.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị Nokia na Neuxs 5 ka Windows PC
Jiri abụọ USB Gịnị jikọọ ma gị Nokia na ekwentị na Nexus 5 ka Windows PC. Gị ma igwe ga-achọpụtara na-egosi na isi window. N'etiti igwe bụ ọdịnaya, otu nke na-akwado ndị na-enyocha. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị nyefee kọntaktị, ị chọrọ uncheck ndị ọzọ na ọdịnaya.
Cheta na: The Wondershare MobileTrans bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Nokia ngwaọrụ-agba ọsọ Symbian 40, Symbian 60 na Symbian ^ 3, Windows 8 na Windows 8.1. Iji nyefee kọntaktị site Windows ekwentị na ngwaọrụ ndị ọzọ, biko ndabere kọntaktị na OneDrive na gị Windows Phone mbụ. Mgbe ahụ Wondershare Mobiletrans pụrụ ịkwado iji weghachi ndabere ka iche na ekwentị.
Nzọụkwụ 3. Paghaa kọntaktị site Nokia ka Nexus 5
Mgbe ihe nile dị njikere, pịa Malite Copy na-amalite na kọntaktị nyefe. Na-elekọta na i kwesịrị Akwụpụla ma ekwentị. Mgbe kọntaktị transfer, pịa OK imechi mmapụta usoro window.
N'ezie, Wondershare MobileTrans bụghị nanị na-ahapụ gị nyefee Nokia kọntaktị na Nexus 5, ọ na-enye gị ka ị na idetuo kọntaktị niile si Nexus 4 ka Nexus 5 na-akpali iPhone kọntaktị na Nexus 5.
Download Wondershare MobileTrans na-agbalị ya na gị onwe gị!
Mgbe Nokia ka Nexus 5 kọntaktị transfer, ị nwere ike na-agbalị Wondershare MobileGo for Android jikwaa kọntaktị, ngwa, ederede ozi, photos, music na vidiyo na gị Nexus 5 site na kọmputa mfe.